နယူးယောက်ရှိဟိုတယ်များ၊ စျေးပေါသောရွေးချယ်စရာများ ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | နေရာထိုင်ခင်း, နယူးယော့
နယူးယော့ ၎င်းသည်ဟိုတယ်ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ပုံစံများနှင့်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံဖြင့်မင်းကို Park Park ကိုရှုခင်းကောင်းကောင်းကြည့်ရှုနိုင်သောကြယ်ငါးပွင့်ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များမှာအချိန်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင် Rockefeller မဟုတ်ရင်ဘယ်ကိုသွားနိုင်မှာလဲ။
ဒီနေ့သင့်အတွက်ရွေးချယ်စရာများပေးပါ နယူးယောက်ရှိကောင်းသောဟိုတယ်များ သူတို့ကမပေးအပ်ထားသော်လည်း, သူတို့သည်အလွန်ထိန်းသိမ်းရန် စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအကြားကောင်းသောစပ်လျဉ်း။ ပန်းတိုင်ယူပါ
သင်သည်ခရီးသွားလူငယ်တစ် ဦး၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ထူးဆန်းသောအရာ၊ ဟစ်စတာ၊ ဖက်ရှင်တစ်ခုခုဖြစ်လျှင်ဤမြို့ကိုရှေးအကျဆုံးသောဟိုတယ်ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ အကြောင်း Sohotelသစ်သားကြမ်းခင်းများနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုများကိုအေးဆေးသောပရိဘောဂများ၊
ဒီဟိုတယ် SoHo မှလမ်းလျှောက်ရန်လိုသည်အရှေ့ကျေးရွာ၊ အီတလီ၊ Little၊ Nolita နှင့် Bowery တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တိုင်ကြား။ မရပါ။ Wi-Fi၊ ဘား၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ငါးအမျိုးအစားအမြင့်ဆုံးသည်စတုရန်းမီတာ ၄၀၀ ရှိပြီးလူငါး ဦး အထိဖြစ်သော Regency Plus ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာမီနီဘားမရှိပေမယ့် Randolph နဲ့အတူအေးမြတဲ့ဘားတစ်ခုရှိတယ် ဘီယာ Saloon မြေညီထပ်တွင်ဘာဂါများနှင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များကိုရောင်းချပေးသည်။
နှစ်ဆအခန်းများသည်ဒေါ်လာ ၁၈၂ မှစတင်သည် အနိမ့်ရာသီအတွက်မြင့်မားသောရာသီအတွက် 320 မှ။ Wifi ကိုသီးခြားစီပေးရတယ်။ လိပ်စာသည် 341 Broome Street ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယရွေးချယ်စရာမှာ Times Square ရှိ Moxyအကယ်၍ မင်းကမြင်ကွင်းရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာဖြစ်ချင်တယ်၊ ဤဟိုတယ်သည်စည်ပင်သာယာရိပ်မြုံရှိသတ္တမရိပ်သာလမ်းတွင်၊ ၃၆ လမ်းနှင့်ဖက်ရှင်ခရိုင်နှင့်တိုင်းရင်ပြင်တစ်လျှောက်လမ်းဆုံတွင်တည်ရှိသည်။ ပိုပါတယ် အခန်း ၆၀၀အားလုံးသေးငယ်သည်အကြီးဆုံးစတူဒီယို suite တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအေးဆေးနေပြီး Yabu Pushelberg လို့ခေါ်တဲ့ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်။
ကြားနေအရောင်များ၊ အချို့သောထိတွေ့မှုများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားအားလုံး၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း၊ ဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့ဘားတစ်ချပ်၊ လှေခါးထစ် နယူးယောက်ကျော်နေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်နံနက်ယံ၌နံနက်စာစားရန်။ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါ Marriot ကွင်းဆက် နှင့်နှုန်းထားများမှာစတင်ပါ 176 ဒေါ်လာ။
တတိယ option ကတော့ ဟိုတယ် Alof, Downtown မန်ဟက်တန်ရှိကောင်းစွာရောင်စုံ။ ၎င်းသည်ဘဏ္Districtာရေးခရိုင်အတွင်းရှိဝီလျံနှင့်နာဆောလမ်းများအကြားတည်ရှိသောကြောင့်သင် ၁၅ မိနစ်ထက်မက Word Trade Center သို့မဟုတ် Wall Street သို့မဟုတ် East River boardwalk သို့လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
သင်ရှိသည် ခေတ်သစ်အခန်း ၁၂၈ ခန်း အခြေခံ၊ စာကြည့်တိုက်၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်၊ ကော်ဖီဖျော်စက်၊ ရေသန့်ပုလင်းနှင့်ဆံပင်အခြောက်ခံစက်များ၊ သူတို့မှာမီနီဘားမရှိပါ, ကုတင်အဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်နှင့်အချို့သောအခန်းများကောင်းမွန်သောအမြင်များရှိသည်။ ၎င်းတွင်ဘားငယ်တစ်ခု၊ အိမ်နောက်ဖေးခြံ၊ အားကစားရုံတစ်ခု၊ စီးပွားရေးစင်တာတစ်ခုနှင့် ၂၄ နာရီရေစာဘားရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှမပါရှိသည့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမယ့် Butler လို့ခေါ်တဲ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ပြင်ပမှာзаказနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ဆအခန်းများမှာစတင်ပါ နိမ့်ရာသီအတွက်ဒေါ်လာ 140 မြင့်မားသောရာသီအတွက် 260 မှ။ မနက်စာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ လူတစ် ဦး လျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှ ၂၀ ဒေါ်လာကြားရှိသည်။ ဝိုင်ဖိုင်အခမဲ့ဖြစ်သည် လိပ်စာ 10-20 အမ်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Freehand အဆိုပါ Flatiron ခရိုင်၌တည်ရှိ၏နှင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ဟိုတယ်နှင့်အတူဘော်ဒါဆောင်၏အရောနှောသူဟာအတော်လေးဖက်ရှင်ကျတဲ့အရာ၊ မိုင်ယာမီမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည်လုံးဝပြန်လည်ထူထောင်ပြီးပြန်လည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအေးမြသောအရောအနှောအဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားသောဟိုတယ်ဟောင်းဖြစ်သော George Washington တွင်လည်ပတ်သည်။
ရှငျဘုရငျ, မိဖုရားအိပ်ရာနှင့်သုံးဘို့အခန်းများပါဝင်သည်အခန်းရွေးချယ်စရာ။ နေ့လည်စာနှင့်ညစာအတွက် Simon & The Whale နှင့်စတူဒီယိုစားသောက်ဆိုင် ၂ ခုနှင့် Simle နှင့် Go ဟုခေါ်သောကဖီးသည်ရေခဲမုန့်နှင့်အထွက်ထွက်ရန်ဖြစ်သည်။ နှုန်းထားများ $ 113 မှာစတင်ပါ။
မင်းကြိုက်တယ် ဘရွတ်ကလင်း? ထိုအခါသင်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် NU ဟိုတယ်Smith လမ်းရှိတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သော Cobble Hill၊ Park Slope သို့မဟုတ် Prospect Heights ကဲ့သို့သောရပ်ကွက်များသို့လွယ်ကူစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သောနေရာတွင်လည်ပတ်သည်။ ဒါ ဘရွတ်ကလင်တံတားမှဆယ်မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည် နှင့်မြေအောက်ရထားနှင့်နီးစပ်သော။ သေးငယ်တယ် Boutique ဟိုတယ် နံနက်တိုင်းမနက်စာစားရသောအပြင်နွေရာသီတွင်အပြင်ဘက်ရှိစားပွဲများကိုယူဆောင်ပေးသောမီးဖိုချောင်ဖွင့်ထားသည်
အခန်းများသည်အမြင့်နှင့်တူသောခံစားမှုရှိသည်။ သူတို့သည်ရိုးရှင်း။ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသစ်သားများစွာနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ရှိပါတယ် အခမဲ့စက်ဘီး၂၄ နာရီအားကစားရုံ၊ WiFi နှင့်အခန်းဝန်ဆောင်မှုတို့ပါဝင်သည်။ ရှိသည် 93 ခန်းManhattan တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် s နှင့် suites များသည်ကြီးမားသည်။ ကုတင်နှစ်လုံးပါသည့်အခန်းများ၊ အိပ်ရာခင်းအပြင်ပုခက်တစ်လုံးပါရှိသည်။
မနက်စာသာစားပါသည်။ စျေးနှုန်းများ? နှစ်ဆအခန်းအတွက် $ 149 မှ အနိမ့်ရာသီအတွက်မြင့်မားသောရာသီအတွက် 379 မှ။ ဝိုင်ဖိုင်အခမဲ့ဖြစ်သည် လိပ်စာသည်ဘရွတ်ကလင်၊ 85 Smith လမ်းဖြစ်သည်။
လှေကားထစ်တွေကိုကြိုက်လား? ထိုအခါသင်သည် Soho သို့ပြောင်းရွှေ့မှာနေနိုင်ပါတယ် Arlo Soho ။ အခန်းပေါင်း ၃၂၅ ခန်းပါ ၀ င်ပေမယ့်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီး ၀ န်ဆောင်မှုများလုံလုံလောက်လောက်ရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ လှေကားထစ်၊ နံရံကပ်ကုတင်များ၊ မြို့၏ရှုခင်းများကိုမြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ဟိုတယ်သည်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ကျန်ရှိနေသောလှေခါးထစ်နှင့်ထိုက်တန်သည်။ မြို့ပြအိုအေစစ် မင်းစိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ်
အခန်းများတွင်မီနီဘား၊ ပြားချပ်ချပ်တီဗွီ၊ စားပွဲနှင့်ဝိုင်ဖိုင်တို့ပါရှိသည်။ by ည့်ခန်းဘားနှင့်လှပသောဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ အတွင်း၌ ၂၄ နာရီစျေးကွက်လည်းရှိသည်။ အခန်းပေါင်း $ 149 မှာစတင်ပါ။ SoHo, 231 Hudson လမ်းတွင်တည်ရှိသည်။
နယ်သာလန်ကနေကွင်းဆက်, CitizenMနယူးယောက်ရှိဟိုတယ်မှာတည်း။ ဒါဟာအယူအဆပါ «သုံးနိုင်သောဇိမ်ခံကား«။ ဟိုတယ်တွင် ၂၁ ထပ်ရှိပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် အခန်းငယ် ၂၃၃ ခန်းs ပေမယ့်ဆွစ်ဇာလန်ပရိဘောဂနှင့်အတူတစ် ဦး ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များနှင့်အတူဘားတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခု၊
နှစ်ယောက်ခန်းအခန်းကဏ္ have ရှိသည် $ 170 မှသည်။ ဟိုတယ်သည် West 218Th လမ်း ၂၁၈ တွင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးဘရွတ်ကလင်ရှိအခြားဟိုတယ်တစ်ခုမှာ တောင်ဟိုတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အပန်းဖြေသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ရန်နေရာများနှင့်အတူတိတ်ဆိတ်ဟိုတယ်ဂိမ်းများနှင့်စာအုပ်များနှင့်အတူ r ။ ယောဂသို့မဟုတ်လှည့်ဖျားသင်တန်းများအတွက်စတူဒီယိုတစ်ခုလည်းရှိသည်။ WiFi၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အခန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အခန်းများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသည့်ရေချိုးခန်းထုတ်ကုန်များ၊
အပေါ်ထပ်ရှိအခန်းများမှအမြင်များသည်စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ။ အဘယ်အရာကိုမှအာမင် သတ္တမထပ်တွင်ပွင့်လင်းသောဘားတစ်ခုရှိသည် အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတစ်ခုနှင့်အတူထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုမှာနယူးယောက်ဖြစ်သည်။
နှစ်ဆခန်းနှုန်းထားများရှိသည် အနိမ့်ရာသီအတွက် 195 ဒေါ်လာကနေ မြင့်မားသောရာသီအတွက် 305 ရန်။ နံနက်စာသည်သီးခြားဖြစ်ပြီးလူတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀ မှ ၃၀ ကြားရှိသည်။ EVEN ဟိုတယ်သည်ဘရွတ်ကလင်၊ Nevins လမ်း ၄၆ တွင်ရှိသည်။
အားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး နယူးယောက်ဟိုတယ်များk, ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ကို web ရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီမတူညီတဲ့ရွေးချယ်စရာများကိုစတင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » နယူးယော့ » နယူးယောက်ရှိဟိုတယ်များ၊
San Antonio, Ibiza မှာဘာကြည့်ရမလည်း